Manala tain-dabozia amin’ny alikaola…
Ny alikaola dia manala ny tain-dabozia miraikitra amin’ny lamba. Mandaitra hatrany izany amin’ny karazana lamba rehetra saingy mila faharetana kely.
- Kikisana amin’ny sotro ny tain-dabozia. Fadiana kosa ny mikiky izany amin’ny antsy.
- Etsy ankilan’izay, afangaro ny rano sy ny alikaola mitovy fatra.
- Rehefa izay dia maka lamba malefaka ary vontosana io fangaro io.
- Petapetahana amin’io fangaro io moramora ny faritra misy tain-dabozia mandrapahafaka izany tanteraka.